काठमाडौं । इजरेलमा अध्ययनकर्ताहरूले एक लाख वर्षभन्दा अगाडि जीवित आदिम मानवको अहिलेसम्म अज्ञात एक प्रकार पत्ता लगाएका छन् । राम्ला सहरनजिक भेटिएको अवशेष त्यस्तो प्रकारको प्राचीन मानवको अन्तिममध्येका एक व्यक्तिको हुनसक्ने अध्ययनकर्ताहरूको विश्वास छ । उत्खनन गरिएका जिवावशेषमा १,२०,००० देखि १,४०,०० ...
असार ११, 2078 काठमाडौं । विश्वमा कैयौं यस्ता अनौठा रितिरिवाज छन् जो बर्षौदेखि चलिआएका भए पनि धेरैलाई भने यसबारे थाहा छैन । चीनमा यस्तै एक अनौठो परम्परा छ जहाँ मानिस मरेपछि कपाल काटेर विग अर्थात टोपी बनाई लगाउने गर्दछन् । चीनको मिआओको ए...
यो जंगल, जहाँ पुगेपछि जो कोहीले आत्मह...
असार ८, 2078 काठमाडौं । यो संसार धेरै नै सुन्दर छ । मानिस यहाँ आफ्नो जीवनको पूर्णकाल जीउन चाहन्छ । तर फेरि पनि संसारका कतिपय स्थानहरु रहस्यमयी छन् । आउनुहोस् यस्तै एक स्थानका बारे चर्चा गरौं । जापानको ऐकिगहारा जंगल प्राकृतिक रुपमा सुन...
यी नरभक्षी कसाई, जसले मानिसको मासु खा...
असार ६, 2078 काठमाडौं । मासु काट्ने कसाइको कामको आडमा मानिस मारेर मानिसको मासु खाने एक नरभक्षी कसाइको पर्दाफाश भएको छ । ती व्यक्तिको घरमा ३ हजार ७८७ वटा मानव हड्डी भेटिएका छन् । यी हड्डीहरु १७ जना फरक फरक मानिसहरुको भएको जाँचमा पाइएको ...
जब प्लाइउडको बाकस बग्दै गर्दा यसरी भे...
असार ४, 2078 काठमाडौं । भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको गाजिपुरस्थित ददरीघाटमा गत सोमबार बिहान गंगा नदीमा एउटा प्लाइउडको बाकस बग्दै–बग्दै आइरहेको थियो । सोमबार गंगामा स्नान गर्न गएकाहरूले बाकसबाट बच्चा रोइरहेको आवाज सुने । उनीहरूलाई अचम्म...
३७ वर्षीया महिलाले कसरी जन्माइन् एकैप...
जेष्ठ २६, 2078 काठमाडौं । एउटी महिलाले कति वटा जन्माउन सक्छिन् होला ? सामान्यतय एउटा । त्यो भन्दा बढ्दै गए ४ वटासम्म जन्माउन सक्छन् । दक्षिण अफ्रिकाकी एक महिलाले एकै समयमा १० जना बच्चा जन्माएकी छन् । ३७ वर्षीया गोसियामे थमराले १० बच्चा ...
कोरोनाबाट बच्न यी व्यक्तिले टाउकोमै झ...
जेष्ठ २२, 2078 काठमाडौं । कोभिड आउँदा जब यूरोपमा सरकारले मानिसहरुलाई दूरी कायम गर्न आग्रह गरेको थियो । यसै सन्दर्भमा बेल्जियमका एक कलाकारले एक नयाँ जुक्ति निकालेका छन् । उनले मास्कको साटो यो अनौठो जुक्ति निकालेका हुन् । एलेन नाम गरेका य...
यस्तो पनि ! मुखले नफुकिकनै यसरी बज्न ...
फाल्गुन १८, 2077 एजेन्सी । बाँसुरी मुखले फुकेर बजाउने बाद्य सामग्री हो । तर बाँसुरी मुखले नफुकिकनै बज्न थाल्यो भने के भन्नु हुन्छ ? यदी यस्तो समाचार सुन्न र देख्न पाइयो भने अब अचम्म नमान्दा हुन्छ । किनकी अब बाँसुरी मुखले नफुकिकनै बज्न थाले...
हरेक श्रीमानले जान्नै पर्ने यी कुरा, ...
मंसिर १७, 2077 म तपाइँलाई मेरो लागि जुनतारा टिपेर ल्याइदिनु भन्दिन् । तर जब बाहिरबाट घर आउनुहुन्छ, साथमा एक मुस्कान लिएर आउनुहोस् । म भन्दिन, कि सबैभन्दा बढी माया मलाई नै गर्नुहोस्, तर एक नजर मायाले त हेर्नुहोस् म भन्दिन कि बाहिर खुवाउन ...
स्थानीय र जीव नै डराउने गरी जब यसरी न...
कार्तिक २५, 2077 काठमाडौं । रुसको एक नदीको पानीको रंग अचानक रगत जस्तो रातो भएपछि स्थानीयहरु आश्चर्यसंगै त्रसित भएका छन । दक्षिणी रुसको औद्योगिक शहर केमोरेवो भएर बहने इस्कितिम्का नदीको पानी रगत जस्तो रातो भएको हो । झट्ट हेर्दा लाग्छ, नदीमा...
यी महिला, जो ५६ वर्षमा ११ औं पटक विवा...
कार्तिक १४, 2077 विवाह गर्नेका लागि हरेक मानिस योग्य जीवनसाथीको खोजी गर्दछन् । उसैका साथ पुरै जीवन बिताउने सङ्कल्प पनि गर्दछन् । तर, अमेरिकामा एक महिलाले आफूले खोजे जस्तो योग्य बरका लागि दश पटकसम्म विवाह गरेकी छन् । उनलाई कति विवाह गरिसके...
अनौठो कुकुर, जुन हरियो रंगमै यसरी जन्...
कार्तिक १४, 2077 इटली । इटलीमायो वर्ष पहिलेभन्दा धेरै अनौठा घटनाहरू भए । इटलीका एक कृषक क्रिस्टियन मालोस्सीले त्यस्तै एउटा अनौठो घटना देखे । उनले पालेको स्पेलाच्चियो नामक पोथी कुकुरले जन्माएका पाँच बच्चामध्ये एउटा हरियो रङ्गको छ । भूमध्यस...
यस्तो पनि ! १४० रुपैयाँमा घर किन्न पा...
कार्तिक १४, 2077 आफ्नै स्वामित्वको राम्रो घर होस भन्ने हरेकको चाहना हुन्छ । तर सबैका चाहना पुरा हुन सक्दैन । किनकी घर बनाउन वा किन्न धेरै ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्छ । कतिपयले आफ्नो जीवनभरको कमाई पनि घरका लागि खर्च गर्छन । तर इटलीको सिसिली द्...
कुखुराको भालेको आक्रमणबाट प्रहरी प्रम...
कार्तिक १३, 2077 फिलिपिन्समा लडाकु भालेको आक्रमणबाट एक प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको छ । अवैधरुपमा भाले जुधाइ भइरहेको सूचनाका आधारमा छापा हान्न पुगेको प्रहरी टोलीमाथि भालेले आक्रमण गर्दा फिलिपिन्समा नगर प्रहरी प्रमुखको मृत्यु भएको छ । अन्त...
आश्विन २८, 2077 एजेन्सी । स्कटल्याण्डको टेक्सल प्रजातिको भेडा ५ करोड ७३ लाख बढीमा बिक्री भएको छ । यो संसारको महँगो भेडा भएको बताइएको छ । सो भेडा गत महिना स्कटल्याण्डको ल्यानार्कको स्कटिश नेश्नल टेक्सल सेलमा बेचिएको थियो । भेडाको शुरुआती ...